Soo-saareyaasha Xarkaha Xarigga PV iyo Warshad - Soosaarayaasha Shiinaha PV Cable Harness
4to1 MC4 Y Laanta isku xira Solar Panel Isku Xirka Isku Xirka
4to1 MC4 Y Laanta isku xira Solar Panel Iskuxirka Isku Xirka (1 Set = 4Male1 Dheddig + 4Female 1Male) waa labo kambiyuutarro isku xira MC4 oo loogu talagalay baararka qoraxda Kuwani 4Y isku xirayaasha waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa isku xirka 4 baalayaasha qoraxda sidoo kale isku xirnaanta, ku habboon MC4 Dheddig lab hal isku xira ka Module PV, .Xidhiidhiyaha laankan 4Y wuxuu ku haboonaan karaa dhamaan MC4 Nooca Photonic Universe qoraxda qorraxda.waa 100% IP67 aan biyuhu kajirin, sidaa darteed waxaa loogu isticmaali karaa banaanka xaalad kasta oo cimilo ah.
IP67 Iskuxirka Isku midka ah 1 Ilaa 3 Y Nooca Y Laanta PV Isku Xiraha Solar
IP67 Iskuxirka Iskuxirka 1 Ilaa 3 Y Nooca Y B Laanta PV Isku Xiraha Solar (1 Set = 3Male1Female + 3Female1Male) waa labo isku xira isku xirayaasha fiilada MC4 ee baalayaasha qoraxda. Xidhiidhiyayaashan ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa isku xidhka 3 fiilooyinka qoraxda sidoo kale isku xidhka isku midka ah, oo ku habboon MC4 Dheddig lab ah isku xira ka socda Module PV. Isku xiraha laanta 3Y wuxuu la jaan qaadi karaa dhammaan baalayaasha qorraxda ee loo yaqaan 'MC4 Type Photonic Universe'. waxaa loo isticmaali karaa banaanka xaalad kastoo cimilo ah.
2to1 MC4 Y Isku xiraha Iskuxidhka Guddiyada Qoraxda ee isku midka ah ama taxanaha ah
2to1 MC4 Y Isku xiraha Iskuxiraya Qaybaha Solarka ee isku midka ah ama taxanaha ah (1 Set = 2Male1Female + 2Female1Male) waa labo kamijiyeyaal isku xira MC4 oo loogu talagalay baararka qoraxda. Xidhiidhiyayaashan ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa isku xidhka 2 fiilooyinka qoraxda sidoo kale isku xidhka isku midka ah, oo ku habboon MC4 Dheddig lab ah isku xira ka kooban Module PV. Xidhiidhiyaha laanta 2Y wuxuu la jaan qaadi karaa dhammaan baalayaasha qoraxda ee loo yaqaan 'MC4 Type Photonic Universe'. waxaa loo isticmaali karaa banaanka xaalad kastoo cimilo ah.
Auto Wire Car Extender isku xira 2 Pin SAE Battery Cable
SAE fiilooyinka waa fududahay in la isku xiro oo laga jaro, loo jajabnaado isku duubnaanta. Waxay ku habboon tahay isku xirka batteriga qorraxda iyo wareejinta, iyo wareejinta batariyada baabuurta iwm. , qoraxda iyo gawaarida.